Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): March 2017
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာ ဆွေးနွေး
at 3/30/2017 09:39:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အ စည်းတွေအားလုံး ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းရေးနည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာဖို့ အမေရိကန်အစိုးရဘက်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မတ်လ (၂၈)ရက်နေ့က အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Patrick Murphy နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ ကချင် ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မအင်ကြင်းနိုင်က အပြည့်အစုံကို တင်ပြမှာပါ။
အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ UNFC ကတောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်အပါအ၀င် NCA အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံး ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို အမေရိကန်အစိုးရဘက်က စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် ကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌ Gum San က ပြောပါတယ်။
“ သူတို့ ပြောတာကတော့ အစိုးရဘက်က ပေးထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ UNFC ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ အချက် (၉)ချက်ကို အစိုးရဘက်က လက်ခံတဲ့အခြေအနေ ကြားသိရလို့ သူတို့ဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ နီးစပ်လာပြီလို့ ထင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က ပြောပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါမမှန်ဘူးလို့။ (၉)ချက်ကို လက်ခံတဲ့ သဘောသဘာဝမရှိပါဘူးလို့။ (၉)ချက်ကို အတိအကျလက်ခံမယ့် အခြေအနေမရှိဘူးလို့ ပြောတာပါ။ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
မေး။ ။ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေပါလဲရှင့်။ ဥပမာ ပြောလို့ရမလား။
ဖြေ။ ။ “တချို့အချက်က နိုင်ငံရေးအရ အားလုံးပါဝင်တဲ့ မူတို့၊ နောက် တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ international witness ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အများကြီး ပြဿနာရှိနေပါတယ်။ နောက်တခုက ဆိုင်းထိုးပြီးမှ တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက် ပထမဆုံးအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တောင် လက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။”
ဒါအပြင် တနင်္လာနေ့က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းကို သွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ဒုလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Patrick Murphy နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ Gum San က အခုလိုပြောပါတယ်။
“အခြားလူတွေနဲ့ တိုင်းတာမယ်ဆိုရင် သူတဦးတယောက်၊ ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ သူပဲအဓိကကျတယ်။ သူပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကတော့ တနှစ်နဲ့ တနှစ် နည်းပါးလာတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အစိုးရနဲ့ ဆက်လက် ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန်ဘက်က လိုလားကြောင်း Mr. Mruphy ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ Gum San က ပြောပါတယ်။
ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအရေးအပါအ၀င်၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကက်သလစ်နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ကန့်သတ်ခံရမှုတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ ကချင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက တင်ပြခဲ့သလိုမလေးရှားနိုင်ငံက ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ အရေးတွေကိုပါ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ Gum San က ပြောပါတယ်။
မတ်လ (၂၈)ရက် အင်္ဂါနေ့က အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Patrick Murphy နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ Kachin Catholic Community of America၊ Kachin American Baptist Association၊ Kachin Baptist Churches နဲ့ ကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာ ဆွေးနွေး
US,State Department hte Kachin Datkasa ni Hkrum shaga.
at 3/30/2017 09:37:00 AM
USA, kaw shanu nga ai Kachin Community na datkasa ni hte US, mung dan asuya,State Department (maigan kyit hkai hkring mang dap) de sadu hkrum shaga ai lam na chye lu ai.
USA,asuyaamai gan kyit hkai hkring mang dap kawn USA, Washington DC, kaw daju ai Kachin Alliance,de USA kaw shanu nga ai Kachin Nawku hpung ni hte Kachin Community ni hte alak myi hkrum sha ga mayu ai lam matut mahkai saw sha ga wa ai lam chye lu ai.
Ya na zawn saw shaga hkrum ai hte maren Kachin Alliance,aning baw Slg Nsang Gum San,NT ning baw Shy Lahkyen Ja Seng Mai, yan kawn woi awn let dai ni (28/3/2017) ya sha ni (11:30 am kawn 1:30 pm) aten du hkra USA, asuyaamai gan kyit hkai hkring mang dap US. Department of state Bureau of East Asia and Pacific Affairs kaw na, David R.Myers(Burma Desk Officer), Patricia Mahoney (Director office of mainland southeast asia), W. Patrick Murphy (Deputy Assistant Secretary for Southeast asia Bureau of East Asia and Pacific Affairs) ni hte sa du hkrum shaga lai wa sai lam na chye lu ai.
Ya na zawn sadu hkrum shaga ai hta Kachin Alliance ningbaw Slg Nsang Gum San, NT Ningbaw Shy Ja Seng Mai,KBC USA,aning baw Rev Dr Jum Maw San Awng, KABA, naw ku hpunganing tau ning baw Rev Dr Lasaw Yaw Ba, Kachin Catholic Community of America (KCCA) kaw na Shd Luksing Kyang Zung, ni kawn ya ten hkyak hkyak kanu mung dan kaw byin nga ai masa lam ni hte, IDP hte seng ai lam, kani nang hpam hte seng ai lam.Malaysia hte Thai mung dan ni hkan naw ngam nga ai Kachin refugee, ni hte seng ai lam ni hpe tang madun ngut ai hpang ka nu mung danasimsa lam hte seng ai lam ni hpe bawng ban ja hkrup ai lam na chye lu ai.
at 3/30/2017 09:31:00 AM
Posted: March 30, 2017 Categories: Newsroom Author: Kachin Alliance Comment: 0
at 3/28/2017 08:06:00 AM
Moiprat kaw nna dai ni na ten du hkra
Makam masham hpung hpe hkrai htai lai nna ,Amyu rusai ,Hkaw hkam hkaw seng,Emperor mung dan kaba ni ga ayai hten za mat sai re.
Roma Emperor Kawn dai ni Iran ,Iraq,syria Mung kan mung dan shagu majan hkrai chyat rai nga ai.
Nkau myi gaw amyat lu nna n kau myi gaw mat mat ,sum mat nga ai.
Laiwa sai ten
Japan mung dan,Indonisia,Malaysia Mungdan ni law malawng gaw Hkristan sasa hte up re ai mung dan ni re,Ya gaw Wa shan nsha ai ni she up mat sai,
Miwa wa mung dan hte Russia Mung dan mung, Makam masham nau htai lai ai ,mang hkanan hkan e,Hpang jahtum Communit Mungdan de Gale mat ai kaw du sai.
Ya an hte kaw mung Hkristan makam shada sha naw htai lai nga yang( Mao )
sut kata Myit jasat ( suthpawm pati ) ni she madu mat wa na ra ai,
shing nrai,wa shan nmai sha mat na ra ai,shing nrai,baw krin ni she law jat wa na ra ai.
shada hkum htai lai saga law.
2 hrs · Arlington, TX ·
Ngai Dinghkrai A Ningmu
Ya ten Wunpawng Facebook mungkan hta Slg Lum Zawng kawn KBC Sara kaba nialakjat hpe madi madun, tsun dinglun ai lam hte seng nna ram ram wa garu nga ai lam hpe mu lu nga ai. Ram ram garu ai ngu ai hta grau nna shada jahpoi ahpyak, mara shagun, n ru n ra byin nga ai ngu yang grau jaw na re.
Ngai hku na gaw Slg Lum Zawng hpe mung mara nmu ai, dai zawn sha KBC Sara ni hpe mung mara nmu ai. Hpung magam gun ni mung Karaiamagam gun rai sai majaw san seng san pra mat sai, lam shagu hta hpa tsun shara n nga kup tsup mat sai ngu n mai myit la nga ai. Hpung magam gun ni mung shinggyim Masha sha re majaw shut shai chye ai, dai hte maren shinggyim masha shagu gaw shut chye ai amyu ni hkrai rai nga ga ai.
Dai zawn shut ai lam ni hpe shada tsun shadum ai, hpaji jaw hkat ai lam ni hpe hkap la hkan sa shading sharai mat wa aiamajaw she shinggyim u hpung u hpawng gaw grau nna rawt jat galu kaba lam maga de rai wa ai. Dai zawn shada hpaji jaw hkat ai lam hpe gaw hpaji hparat hkum tsup ai, myit marai kung kyang ai ni sha chye hkap la nga ai. Myit masa grit nem ai, hpaji machye machyang n nga ai ni gaw hpaji jaw shading sharai ai lam hpe hkap la hkan sa, shading sharai na malai nhtang hku mara sha gun, tsun jahpyak, mara tam ai lam ni hpe galaw chye ma ai.
KBC Sara ni mung, masa hta hkan nna hpung masha ni chye na hkawn hkrang hkra tsun shadum ai lam rai na re ngu hpe kam ai. Slg. Lum Zawn hku nna mung, mung masa la wa re majaw mung masa lam hku nhtap htuk dum ai hpe mu ai majaw mara sha gun ai hku nre sha, madi madun ai lam rai na re ngu kam ai.
Dai zawn re lam hpe kaja wa na tsun shaga ai ni nan pyi hpa ntsun, zim rai nga ai hpe anhteanga la ga ni wa she nang shoi nang sha nga tsun jahta hkat, shada jahpyak hkat taw yang gaw anhte she myit masa gyit nem ai ni tai wa na ga ai.
Dai zawn anhte shada lachyum npru shada tsun jahpyak, n ru n ra byin taw yang gaw anhte Myu Sha niayaw shada ai pan dung gaw grau grau she tsan wa maga de rai na re. Bai, anhte Myu Sha ni shada dai zawn n ru n ra byin na hpe ra sharawng nga ai Myu Sha niaHPYEN wa gaw mani sum sai rai myit dik myit pyaw let yu mada nga na re hpe dum ga ngu let,
HPAJI DAW CHYE AI LAW NGA YANG, LAWT PRU SHARA NGA AI. ( GA SHAGAWP 11:14B)
at 3/27/2017 11:03:00 AM
Gumgrawng Hkan Naw·
Anthe W.P amyu masha ni hta ngai grai hkrungga ai kaw Rev. Dr. Lahtaw Gum Se( KTCS Jawng Up Usa) mung lawm ai. Sara Kaba gaw grai si mani ai, hpaji chye ai hte asak kaba tim prat grai dep ai wa re ngu mu lu ai. Masha kaba/kaja, chye ai/n chye ai ni yawng hpe rap rap ra ra hku nna hku hkau let kanawn mazum chye ai wa mung re. Prat dep ai ngu ai hta prat dep ai arung arai ni hpe lu lang ai hte manu dan ai bu hpun palawng ni mari lu hpun ai hpe tsun ai nre. Byin lai mat wa sai, byin nga ai lam hte byin wa na lam ni hpe chye mu chye sawn let asak chye hkrung ai wa mung re ngu mu ai. Ramma nianingmu hpe Grai manu shadan chye ai Sra kaba langai Mung re. Sara kaba gaw Kachin theologian/philosopher mung re. ShiaKachin hte seng nna makam masham/mung masa/ shinggyin nga pra masa - religious/politcal/social perspectives on "the Kachins" ni gaw grai manu dan nga ai.
Shi tsun lai mat ai lam law law kaw nna ngai ya dai ni du hkra naw sharin masing la ai lam langai mi hta:
" Anhte Wunpawng amyu masha ni gaw Seminar-Bawngban-dinglun hpawng ni law law glaw ai majaw grai galu kaba kung zet wa nga ai" nga nna KBC-EC zuphapwng kaw kalang mi tsun sang lang ga ai lam hpe ya du hkra myit dum hkaja sharin la nga ai .Dai sharin la ai lam kaw la kap nna anhte amyu masha ni matu lama mi matsing sharin la lu na nhten ngu myit yu ai hte ngai langai hkraianingmu hpe kadun mi tang madun dat ai. Sharai jahtuk ra ai lam nga yang mung jawm tsun/bawngban sharai ya na hpe myit mada ai.
Dai majaw 1947-1962 na mung masa mabyin langai hpe
hpe myit dum ai.
U Nu woi awn ai Myenmung Democracy Parliament up-hkang masa hpe grai madang tsaw ai hku nna gwi gwi shawng nnan ding lun ai wa gaw Jinghpaw mung masa ningbaw langai mi re nga ai Du Wa Zan Hta Sin re. Shi gaw KNC-Kachin National Congress Party kaw na re nhtawm, Rawang amyu lakung kaw na re. Shiading lun bawngban ai laika buk-buklet langai mi re nga ai ai, Democracy Byaung Byan" or "Reserved Democracy" ngu ai laika buk gaw anhte Wp amyu masha ni mung masa party ningbaw langaianing mu ding lu ai lam gaw grai manu dan ai hte grai madang tsaw ai labau langai mi mung re mat sai re. Dai hkring htawng hpe nmai malap na re.
Pangmu Shayi ( May 16, 2015, Kachinland News), Du Wa Zan Hta Sin: A Profile In Leadership hta Du Wa Zan Hta Sinalam hpe ndai hku ka da nga ai; " As parliamentarian, Zan Hta Sin distinguished himself as articulated debater, always on the ready to speak up for the Kachin rights. Du Wa Zan Hta Sin gaw anhte wunpawng amyu masha niamatu grai kung kyang ai hku nna, tsun jahta bawngban dara la ai wa re ngu nna mung shi hkum nan mung hkam la lai wa sai re.
Shaloi nye myit karaw kata hta "Seminar-Bawngban hpawng"alam hpe law law myit mat wa ai. Seminar-Bawngban Hpawng ngu ai gaw Hpaji daw ai hte bawngban ai lam re nga ai . Dai hta e; Research/Analysis/critical thinking/report/feedback/ - Sawk sagawn ai/ding lun ai/tang madun ai/gwi gwi tsun ai hte myit ai/ galaw lai mat wa sai lam ni hpe bai nthang shat lai lai ai-myit yu ai lam ni re nga ai.
Dai majaw Ga shagawp 11:14 hta,
"Hpaji daw chye ai nyan n rawng yang, mung masha ni sum wa ma ai; Hpaji daw chye ai law nga yang, lawt pru shara nga ai."
Dai majaw amyu langai mi lawt lu na matu gaw hpaji daw chye ai masha langai lahkawn hte sha gaw nmai na re, hpaji daw chye ai masha law law ra na re.
Hpaji daw chye ai ni ngu ai hta; ningmu law law nga ra na re. Dai ningmu ni hta Makam masham/Mung masa/Tara masa/Sut masa/Shing ni(Art)/Hpyen masa/shinggyin nga pra masa ning mu hte kaga ningmu ni law law hte hpaji daw chye ra na re. Tim, bawngban ding lun ai lam hta ti nanganingmu hte manang nianingmu ni gaw bung ai aten nga ai zawn nbung ai aten mung nga na re. Raitim, nbung ai majaw anhte ni shada gaw hpyen hku nna gaw nbyin hkra gaw hpaji rawng ra na re. " We agree our disagreement" masa hku re yang gaw anhte bawngban dinglu ai lam gaw grai manu dang ai bawngban dinglun ai lam byin tai na re. Anhte ni yawng mung grai kungkyang zet let ai amyu masha ni tai wa na hpe myit mada ai. Tinang hte ningmu nbung ai yawng gaw tinangahpyen re nga ai ningmu re yang gaw anhte amyu ni kata hta ning mu n bung hkat ai ni yawng gaw shada hpyen mai tai hkat wa nga ai. Dai majaw ningmu n-bung shagu gaw hpyen hku nna nmai masat hkat na re. Dai gaw kung kyang zet let ai masha/amyu langai ai kumla maka mung re nga ai.
Dai majaw hpaji daw chye ai masha ni law law nga wa hkra jawm shalat/ mazing/ manu shadan sa wa ga.
ဆန္ဒပြပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်က ကရင်နဲ့ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသားတွေပါ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသား မပြိုကွဲရေး၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ပြည်သူအသံ ဒေသခံအသံ နားထောင်ပေးရေး ကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
at 3/20/2017 11:15:00 AM
Banyar Mon's post.
တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ မွန်တိုင်းရင်းသားတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတားအမည် အလိုမရှိကြောင်းနဲ့ သံလွင်တံတား(ချောင်းဆုံ)အမည်ပေးဖို့ မော်လမြိုင်မြို့မှာ ဒီနေ့ လူ ၄ သောင်းကျော်က ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်က ကရင်နဲ့ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသားတွေပါ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသား မပြိုကွဲရေး၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ပြည်သူအသံ ဒေသခံအသံ နားထောင်ပေးရေး ကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။RFA 19.3.2017
စဿတ်တၛဲ - ၁၉.၀၃.၂၀၁၇ ၊ တၛဲအဒိုက် ၊
ရက်စွဲ - ၁၉.၀၃.၂၀၁၇ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ၊
စနူအခိင်နူဂယး ၈ နာဍီ စိုပ် ၁၂ နာဍီ ဒေါဝ်တၛဲ
ဒှဲာကောံ - ဒဒန်ဢောံဍုင်၊ ဍုင်မတ်မလီု
အချိန် - နံက် ၈ နာရီ မှ နေ့ လည် ၁၂ နာရီထိ
စုရပ်နေရာ - မြို့ မတံတား ၊ ကမ်းနားလမ်း ၊ မော်လမြိုင်မြို့ ၊
American Mungdanean hte Baw sang ni kade du sai ngu gaw ndai sumla yu yang chye lu ai
at 3/18/2017 10:44:00 AM
Anhte Bawsang ni American Mungdanekade du sai ngu gaw ndai sumla yu yang chye lu ai. Ndai gaw 2001 kaw na 2017 du hkra State Dept hku nna hta da ai "Refugee" shang jahpan re. Da sang bai shaga la ai ningrum ningtau, kashu kasha jahpan pyi nlawm ai. Nlaw htum refugee 1 gaw dum nta masha 2.5 hpe shaga la ai hpe sawn yu yang, 419,185 daram rai taw sai. Ndai gaw kahtap shangai ai nlawm ai. US Mungdan hta status la sha naw re, Australia, UK, EU, Canada, hte Japan, Korea nlawm shi ai.
Dai majaw anhte Bawsang ni su hprang ging sai. US Mungdan hta, Myen Asuya nlu galaw ai "grass roots" campaign kade madang mai galaw ai ngu gaw ndai jahpan sakse madun nga ai. 2008 - 2017 lapran American shang masha jahpan kaw na Sgaw Karen ga shaga masha #4 law htum re, 43,618. Anhte amyu sha ni mung mungkan ting chyam hkawm tim, bra ai nre sha ring chying ra sai, gahkyin gumdin ra sai.
(credit: US State Dept.)
Lani myi Bawsang niamatu ahkyak ai Mung masa lam daw dan "Referendum" galaw ra wa aten hta, maigan du nga ethnic masha jahpan ni hpe hta yang she teng man ai dawdan ai lu la na re ngu mung mu mada ai.
By Gum san nsang
US မှာ နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် သိနားလည်အပ်သော ဥပဒေ အကြောင်းတစေ့တစောင်း
at 3/18/2017 10:35:00 AM
react-text:6Close /react-text
Chin TV International
at 3/15/2017 11:19:00 AM
မွန်၊ ရခိုင်၊ တနသာင်္ရီမှာ ဓာတ်ငွေ့ထွက်တယ်။ သယံဇာတတွေ ထွက်တယ်။ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွေ လုပ်လို့ ရတယ်။ ရေလုပ်ငန်း၊ ရာဘာလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေ အကြီးအကျယ် လုပ်လို့ရတယ်။ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးကလည်း အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအတွက် နိုင်ငံခြားအရံငွေတွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရှာပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။ လူဦးရေနဲ့ ပညာတတ်မှုနှုန်းကလည်း ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဖို့ လုံလောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မွန်၊ ရခိုင်၊ တနသာင်္ရီမှာ မြို့ကြီးတွေ ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်။ ပြည်မမှာ မြို့ကြီးတွေ ပေါ်ထွန်းလာတယ်။
ချင်းပြည်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကရင်နီပြည်နယ်တို့မှာ သဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ လုပ်လို့ ရတယ်။ သတ္တုတွင်းတွေ ထူထောင်လို့ ရတယ်။ စိုက်ပျိုးရေး အရမ်းကို အောင်မြင်မယ့် ပြည်နယ်တွေပဲ။ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် လှေခါးထစ်စိုက်ပျိုးရေးတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ လာကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် လက်ဖက်ခင်းတွေကို လှပအောင် စိုက်ပျိုးနိုင်ရင် အရမ်းကို လှပသွားမှာပါ။ လူသူမရောက်သေးတဲ့ တောတောင်သဘာဝတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ရေအားလျပ်စစ်လုပ်ငန်းတွေ အကြီးအကျယ်လုပ်လို့ ရတဲ့ ပြည်နယ်တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီပြည်နယ်တွေဟာ ရစရာမရှိလောက်အောင် နောက်ကျကျန်နေခဲ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကဆိုရင် ဒီဒေသတွေဟာ အင်မတန်မှ ငြိမ်းချမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကရင်နီနယ်ဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့နယ်တစ်နယ်ပါ။
ကချင်နဲ့ ရှမ်းတို့ဟာ သူတို့မှာသာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရှိနေခဲ့ရင် အင်မတန်မှ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ပြည်နယ်တွေ ဖြစ်နေမှာပါ။ ကချင်ပြည်မှာဆိုရင် ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ အကြီးအကျယ် ထွက်ရှိပါတယ်။ ရှမ်းမှာလည်း အဲ့လိုပါပဲ။ နောက်ပြီး ဒီပြည်နယ်ကြီး(၂)ခုဟာ တိုင်းပြည်ငယ်များလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီပြည်နယ်နှစ်ခုထက် သေးငယ်တဲ့ တိုင်းနိုင်ငံတွေဟာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ပလောင်ဒေသဟာ လက်ဖက်ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါ့မယ်။ ကချင်ဒေသဟာ နှင်းကျနေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရှေ့တောင်အာရှဒေသတစ်ခုပါ။ ဝဒေသမှာလည်း ရှားပါးတဲ့ မြေသားထွက်ရှိပြီး ဖုန်းစတဲ့ ဖိုင်ဘာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာမှာ အများကြီး အကူအညီ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပအိုဝ်းနဲ့ ရှမ်းတို့ရဲ့ ဒေသတွေမှာလည်း တွင်းအောက်သယံဇာတတွေ ထွက်ရှိပြီး အင်လေးရေကန်ကြီးဟာ ခရီးသွားတွေ အင်မတန်မှ နှစ်ခြိုက်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ တွေးကြည့်လေ...ကချင်ပြည်နယ်ဟာ တောင်ကိုရီယားနည်းပါး ရှိပါတယ်။ ရှမ်းပြည်ကြီးဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံလောက် ကြီးပါတယ်။ ဒီလိုနယ်မြေမျိုးဟာ ပြည်မကနေ ဘာမှ မရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ လာရောက်ခြယ်လှယ်ခြင်းကို ခံနေကြရတာ ဖြစ်တယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဟာ မိမိတို့ဒေသရဲ့ တန်ဖိုးကို မသိရှိကြပါဘူး။ မိမိတို့မှာ ရှိတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အင်အားကိုလည်း မသိရှိကြပါဘူး။ မိမိတို့မှာ ရှိနေတဲ့ အင်အားအစစ်အမှန်ကို မေ့ပြီး ပြည်မကနေ လာရောက်တဲ့ မြန်မာအုပ်ချုပ်သူတွေကို အားကိုးကြပါတယ်။ မိမိတို့ဒေသမှာ ထွက်ရှိတဲ့ သယံဇာတတွေကို သူတို့ထုတ်ယူသွားကြတာကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ မိမိတို့က အခွန်ကို ဆောင်ရပြီး မိမိတို့ကို အမှန်ကတယ် ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မရရှိကြပါဘူး။ မိမိတို့ပြည်နယ်မှာတောင် မိမိတို့လူမျိုးဟာ ဒုတိယနိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ ကျေနပ်နေကြရပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတော့ မိမိတို့ဘိုးဘွားပိုင်ရေမြေလေအားလုံးဟာ မြန်မာပိုင်လိုလို ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို လက်သင့်ခံလို့ မရပါဘူး။ တော်လှန်ပုန်ကန်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုတော်လှန်ပုန်ကန်တဲ့နေရာမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးချင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်း၊ သူရဲကောင်းဆန်ဆန်နဲ့ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ပြောက်ကြားစနစ်ကိုပဲ အရင်းခံပြီး တော်လှန်ရေးအဆင့်အထိ အဆင့်မမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်လည်း အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံးဟာ တပ်ပေါင်းစုအသွင်နဲ့ တမိန့်တသံထဲ တော်လှန်ရပါ့မယ်။ တပ်ပေါင်းစုအသွင် လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ လူမျိုးအရ အမြင်ကျယ်ဖို့ လိုပ့ါမယ်။ နယ်မြေအရလည်း သဘောထားကြီးဖို့ လိုပါ့မယ်။ ဒီလိုမျိုး အမြင်မကျယ်ခဲ့ရင်၊ သဘောထားမကြီးနိုင်ခဲ့ရင် ရှိရှိသမျှလူမျိုးတွေဟာ ပြည်မအစိုးရကို အညံ့ခံမိရာ ရောက်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်ရာရောက်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတို့ဒေသကို လာရောက်ကြပါ၊ သိမ်းပိုက်လိုက်ကြပါ၊ မိမိတို့က ဗမာတွေရဲ့ လက်အောက်ကို ဝင်ရောက်ကြပါ့မယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။
၂။ နိုင်သက်လွင်ဟာ မွန်အမျိုးသားပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ဖူးပါတယ်၊ သူ့သမီးဟာ ဗမာနဲ့ ညားပြီး NLD မှာ အမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခု မွန်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးရမယ့်နေရာမှာ NLD က ဒီမိသားစုကို သုံးခဲ့ပါတယ်။
၃။ ရခိုင်မှာလည်းပဲ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို တိုက်ဖို့ ဦးအေးသာအောင်ကို သုံးပါတယ်။ ရှမ်းတွေမှာလည်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပလောင်တွေမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကရင်တွေမှာဆို အခြေအနေက ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒေသအသီးသီးမှာလည်းပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ငါးကြင်ဆီနဲ့ ငါးကြင်ကြော်နေကြတာကို တွေ့နိုင်မှာပါ။
လူမျိုးအမြင်ကျဉ်းတယ်လို့ စွတ်စွဲချင်စွတ်စွဲပါ။ ဗမာအချင်းချင်း မညီကြဘူးဆိုပေမဲ့ သူတို့မညီကြလို့ တိုင်းရင်းသားတွေက အခွင့်အရေးပိုရသွားကြတာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မညီညွတ်ကြတာကိုပဲ အသုံးချပြီး တိုင်းရင်းသားတို့ဒေသမှာ သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ နယ်ချဲ့လာကြတာကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို မသိရှိဘဲ တော်လှန်ရေးကို လုပ်နေခဲ့ရင် လူကျွံဘော မဖမ်းတတ်ဘဲ ဂိုးတက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားမိတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့မှာ တိုင်းရင်းသားစိတ်ဓာတ် အမှန်တကယ် ရှိနေကြလား။ ရှိကြရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အရင်လုပ်ပါ။ သူပုန်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါ။ အကြမ်းဖက်သမားတွေပါလို့ အစွတ်စွဲခံရရင်လည်း အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်ကို လက်ခံလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မိမိတို့ဒေသကို ဒုက္ခပေးဖို့ ရောက်လာတဲ့ အဝေးက ဧည့်သည်တွေကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မျက်နှာသာ မပေးမိကြပါစေနဲ့။ သူတို့ဟာ အလာကောင်းတဲ့ ဧည့်သည်တွေ မဟုတ်ကြပါ။ သူတို့ရောက်လေရာမှာ ပြဿနာတွေချည်းပဲဆိုတာ ကွက်ကွင်ကွင်းကွင်း တွေ့မြင်နေတာပဲမဟုတ်လား။U Ravika
at 3/06/2017 10:06:00 AM
KIA ကို အနိင်​တိုကိရန်​ မဖြစ်​နိင်​ဟု ကချင်​ပြည်​နယ်​ စစ်​တိုင်းမှုး ​ဟောင်း အုန်းမြင့်​ ​ပြောကြား
at 3/04/2017 11:24:00 AM
Lahpai Gam's post.
" KIA ကို အနိင်​တိုကိရန်​ မဖြစ်​နိင်​ဟု ကချင်​ပြည်​နယ်​
စစ်​တိုင်းမှုး ​ဟောင်း အုန်းမြင့်​ ​ပြောကြား"..
ကချင်​ပြည်​နယ်​တွင်​ နှစ်​​ပေါင်းများစွာ တာဝန်​ ကျခဲ့ပြီး
တိုင်းမှုးရာထူး အထိ တာဝန်​ ထမ်း​ဆောင်​ ခဲ့​သော
​တိုင်းမှုး​ဟောင်း အုန်းမြင့်​ က ယ​နေ့ မီဒီယာ များနှင့်​ ​တွေ့ဆုံရာတွင်​
စစ်​တပ်​ အ​နေဖြင့်​ KIA ကို အနိင်​ တိုက်​ရန်​ မှာ မဖြစ်​နိင်​​ကြောင်း
ဌင်း က " ကျ​နော်​ ကချင်​ မှာ နှစ်​​ပေါင်းများစွာ တာဝန်​ ကျခဲ့ပါတယ်​
ဒါ့​ကြောင့်​ KIA နဲ့ တပ်​ ရဲ့ အ​ခြေအ​နေကို လဲ ​ကောင်း​ကောင်း
စစ်​တပ်​အ​နေနဲ့ KIA ကို အကြိမ်​​ပေါင်း​မြောက်​မြားစွာ ထိုးစစ်​ ဆင်​
တိုက်​ခိုက်​ ခဲု့ပြီးပါပြီ ..ဘယ်​လိုမှ အနိင်​မရ နိင်​မှန်းလဲ ​အောက်​​ခြေ
စစ်​သား​တွေနဲ့ တပ်​မှုး​တွေ အကုန်​လုံး လဲ သိကြပါတယ်​..
အထက်​က အ​ခြေအ​နေ မှန်​ကို လျစ်​လျူရှု ထားကြလို့ပါ"
အဘယ့်​​ကြောင့်​ KIA ကို တပ်​မ​တော်​ မှ အနိင်​မရ နိင်​တာလဲဟု
မီဒီယာ များမှ ဆက်​လက်​​မေးမြန်းရာ ဒုဗခက ​ဟောင်းက
" ဒီလို​လေ KIA ဆိုတာ ကချင်​လူထုရဲ့ ​ထောက်​ခံ မှုကို အပြည့်​အဝ
ရရှိထား တဲ့ တပ်​ဖြစ်​တယ်​ ဒါ့​ကြောင့်​ ​ဒေသခံ ​တွေရဲ့ ပူး​ပေါင်း
ပါဝင်​မှုကို ရရှိထား တယ်​။
​နောက်​ပြီး ​မြေပြင်​စစ်​ဆင်​​ရေး မှာလဲ KIA က နယ်​​မြေကျွမ်းတယ်​ဗျာ
သူတို့ နယ်​ကို သူတို့ ​ကောင်း​ကောင်း နားလည်​တယ်​။
ကျ​နော်​တို့ က အစိမ်းသက်​သက်​ ဆို​တော့ KIA ရဲ့ ​ဗျုဟာ ဖြစ်​တဲ့
​ပြောက်​ကျား စစ်​မှာ ကျဆုံးရတာ​ပေါ့" ဟု​ဖြေဆိုသွားပြီး
​အောက်​​ခြေ စစ်​သား များရဲ့ စွမ်းရည်​ နှင့်​ စိတ်​ဓာတ်​ ပိုင်း ဆိုင်​ရာ
ကို ​မေးမြန်း ရာတွင်​ တိုင်းမှုး​ဟောင်းမှ " ဒါက ​တော့ အ​ထွေအထူး
​ပြောစရာ မလို​အောင်​ သိသာ ပါတယ်​​လေ။
ကချင်​ ရဲ​ဘော်​တို့ဆိုတာ အခုမှ မဟုတ်​ဘူး ကိုလိုနီ ​ခေတ်​ကတည်းက
တိုက်​ရည်​ခိုက်​ရည်​ ​ကောင်းတယ်​ဆိုတာ သမိုင်းမှာ အများကြီးကိုး
ပြီး​တော့ သူတို့ အ​နေနဲ့ လက်​ရှိမှာ ကိုယ့်​ လူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်​ ကို ကာကွယ်​ ရမယ်​ ဆိုတဲ့ စိတ်​ဓာတ်​ ပါ အပြည့်​ ရှိ​နေ​တော့
​ပြောစရာ မလို​အောင်​ ပြည့်​စုံ​နေတာ​ပေါ့။
ကျ​နော်​တို့ ဘက်​ကကျ မတူဘူး​လေ ​အောက်​​ခြေ ရဲ​ဘော်​ အများစုက
လုပ်​စရာ အလုပ်​မရှိလို့ တပ်​ထဲဝင်​လာတာ နဲ့ ​ပေါ်တာ ဆွဲခံထားရ
တာနဲ့ များ​နေတာကိုး..ပြီး​တော့ ကျ​နော်​တို့ ရဲ​ဘော်​​တွေ အ​နေနဲ့ က
သူတို့ဟာ မတရား ကျုး​ကျော်​ စစ်​ကို ဆင်​နွဲ​နေရ တယ်​ဆိုတာ
မသိစိတ်​ က ​နေ သိ​နေ​တော့ တိုက်​ခိုက်​တဲ့ ​နေရာမှာ လိပ်​ပြာ မလုံတာတို့ ​ကြောက်​တာတို့ ဖြစ်​တာ​ပေါ့။ ဒါ့​ကြောင့်​လဲ ၂၀၁၂ မှာ
တပ်​​ပြေး​တွေ တပ်​တွင်းပုန်​ကန်​မှု​တွေ ကချင်​ပြည်​မှာ အများဆုံး
ယခုလက်​ရှိ ဆင်​နွဲ​နေတဲ့ စစ်​ပွဲ အ​ခြေအ​နေကို​တော့
" ခု လုက်​​နေတဲ့ ထိုးစစ်​ဆင်​မှု​တွေက စစ်​တပ်​အ​နေနဲ့ ကိုယ့်​​သေတွင်း
ကို ကိုယ်​တူးတာပဲဗျ.. ဂိ​ဒေါင်​ ကို တိုက်​တုန်းကလဲ ကျ​နော်​​ပြောတယ်​
အဲ့ဒါ KIA ရဲ့ ​ထောင်​​ချောက်​ မင်းတို့​တွေ လူအများ ကြီး​သေ
​ငွေ အများကြီး ကုန်​မှ အဲကုန်းကို KIA က ​ပေးလိမ့်​မယ်​
သူတို့မှာ အဲလိုကုန်း​ပေါင်း မ​ရေမတွက်​နိင်​ ​အောင်​ရှိတယ်​လို့​ပြောခဲ့တာ
ကို နားမ​ထောင်​ကြဘူး...ခုလဲကြည့်​​လေ ဘယ်​​လောက်​စစ်​ကူ ပို့ပို့
ဘယ်​​လောက်​ ​လေတပ်​အင်​အား သုံးသုံး KIA က ဘာမှ မဖြစ်​ပဲ
ကိုယ်​​တွေ တပ်​ကသာ အထိနာ​နေတာ မှတ်​လား..
ဒါ့​ကြောင့်​ ကျ​နော်​​ပြောချင်​တာက KIA ကို တိုက်​ဖို့ မစဉ်းစားကြနဲ့
ဘယ်​​တော့မှ နိင်​မှာ မဟုတ်​ဘူးဆိုတာကိုပဲ"ဟု ဌင်း၏ အမြင်​ကို
မီဒီယာ များ​ရှေ့ တွင်​သုံးသပ်​ ​ပြောကြားသွားပါသည်​ ။.
at 3/03/2017 12:02:00 PM
Part (1) #Wunpawng Ramma Ni N Chye N Mai Rai Nga Ai Tengman Ai Labau, Kachin Sub-State Byin Pru Wa Ai Lam #Mungmyit-Sinli Labau #Sam Mung Ngu Hkum Tsun Ya Myi! Anhte Sam Ni Kaw Machyu Taw Ai Ni N rai Ga Ai, Moi AD 1400 Daram Kaw Nna Nga Hkrat Wa Ai Anhte A Wunpawng Ga, Mungmyit-Sinli Ga Ngu Ai Re. Tara Kasa Slg. Lashi La (Lashu) #kachin Technological Society #kts #kls
ledo lam Miwa ni Kattaya, concrete hte galaw wa sai
at 3/03/2017 11:49:00 AM
Shing Kri ·
Hugawng Danai ledo lam Miwa ni Kattaya, concrete hte galaw wa sai. Lam kaja nna htaw wa htaw sa kaja ai zawn wunpawng Kachin amyu sha ni mung lu tawn da ai htinghput htingra lamu ga ntat sum na ahkyak ai.
Hugawng hkaimu nhtoi hpe jauman buga masha ni hte rau kabu kara galaw la ngut sai.
at 3/03/2017 11:41:00 AM
Shing Kri added5new photos.
·Myithkrum let yuzana company hte gumshem ladat hte Wunpawng mungdan hta tawtlai shang kabye, lamu ga zing ai ni hpe gawt shapraw kau na matu myithkrum la lu sai. Karai Kasang chyeju hpe shakawn ai.
တောင်သူလယ်သမားနေ့တွင် ဟူးကောင်း Mungchying Rawt Jat (MRJ) အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
at 3/03/2017 11:29:00 AM
ဟူးကောင်းဒေသ ၀ါရာဇွပ်ကျေးရွာတွင် Mungchying Rawt Jat (MRJ) အဖွဲ့အစည်း မှ ဥင်္ီးဆောင်၍တောင်သူလယ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ြ
at 3/03/2017 11:27:00 AM
Kdng Kachin's post.
မတ်လ-၂၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဟူးကောင်းဒေသ ၀ါရာဇွပ်ကျေးရွာတွင် Mungchying Rawt Jat (MRJ) အဖွဲ့အစည်း မှ ဥင်္ီးဆောင်၍တောင်သူလယ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှ ကချင်ပြည်နယ်တောင်သူများကွန်ယက်၊ ကချင် အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ (WMR)၊ ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက် (KDNG)၊ ဖားကန့်မြို့နယ်မှ (Wunpawng Myu Sha Zinlum) အဖွဲ့အစည်း၊ ယုဇနကုမ္ဗဏီမြေသိမ်းယူမှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးသော ကျေးရွာစုစုပေါင်း (၂၄) ရွာမှ ရွာသူ၊ ရွာသားများ နှင့် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့များ လူဦးရေစုစုပေါင်း ( ၆၀၀ ) ကျော် ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည်။